I-JINAN Lide RUBBER kunye neplanethi CO, LTD. I-RUBBER JOINT
Ukudityaniswa kwamadolo erabha kudityaniswa kumbhobho, okunokuthi kunciphise ukungcangcazela, kunciphise ingxolo, ukukhusela inkqubo yombhobho kumandla okuqalisa kunye nokuhamba kwenkqubo, imbuyekezo yokuhamba kunye nokungahambi kakuhle komgca wombhobho. Yenziwe lukhuni ngeentsimbi zesinyithi zentsimbi yomibini kumacala omabini.
kodwa azikhawulelwanga kwi:
Iinkqubo zeHVAC zorhwebo
Iinkqubo zokuhambisa imibhobho
Izityalo zokucoca amanzi amdaka
Iinkqubo zamanzi amdaka
Ii-elastomers ezininzi ziyafumaneka
Imilinganiselo yobuso encinci yobuso
Ulungelelwaniso olulodwa okanye oluninzi
Inciphisa i-harmonics yombhobho
Sisoloko sinyanzelisa izibonelelo ezihambelanayo.
sikholwe ukuba siya kukunceda ukuba ufumane izabelo zentengiso ngakumbi kunye nenzuzo ethe kratya.
Ukuphila kumgangatho kunye nophuhliso kuxhomekeke kudumo oluhle lweemarike.
Isigama sethu senkonzo kukufumana abathengi ngokwenza iimveliso zodidi lokuqala, umgangatho wokuqala, inkonzo ekumgangatho wokuqala, ulawulo lodidi lokuqala.
Iinkcukacha zemveliso ephindwe kabini ...
Iinkcukacha zenkqubo ye-arch ephanga ...
Iinkcukacha ngohlobo lwe-rubol ...
Iinkcukacha Zinyanzelekile ...
Iinkcukacha zeyunithi yolawulo ...
Iinkcukacha nge-Rubber Pipe yi ...
Iinkcukacha ii-elastomers zi ...
Ukuvunywa kwe-de confistité sanitaire ”(ACS) imvume yaseFrance sele iqalile ngo-Aug, 2020.
I-"Attestation de conformité sanitaire" (ACS) sisatifikethi samanzi sokusela saseFransi esibonisa ukufaneleka kweemveliso eziza kudibana namanzi enzelwe ukuselwa ngabantu. Ngo-Aug, 2020, ngokusekwe kwimfuno yomthengi, siye sahlela ...
NgoJuni, ukudibana kwethu kwirabha ye-EPDM kudlulile kuvavanyo lweSingapore SETSCO.
Indlela yovavanyo: I-SS 375- Ukufaneleka kweemveliso ezingenasinyithi ukuze zisetyenziswe ekunxibelelaneni namanzi enzelwe ukusetyenziswa ngabantu ngokubhekisele kwiziphumo zabo kumgangatho wamanzi. 1) Icandelo 1: Ukucaciswa 2) Icandelo 2: Iisampulu zovavanyo 3) Icandelo 2: 2: 1: Od ...
NgoJulayi.2,2019, safumana isatifikethi seEC.
NgoJulayi.2,2019, safumana isatifikethi seEC. Iimpahla ezifanelekileyo kukwandiswa okuguquguqukayo okwenziwe ngokudibeneyo kwerabha edityanisiweyo, impahla ye-EPDM phantsi kwenkcazo ye-EN681-1 1996. Nika ingxelo: HST-JNLR2119062045 Ulwakhiwo oluneenkcukacha lume ngolu hlobo: Uhlobo olunye lwe-arch flange ephakanyisiweyo yobuso / ubuso obucekeceke ...
Nge-14 kaJuni ka-2019, sifumene izatifikethi ze-Wras.
Amanzi okusela abaluleke kakhulu kwimpilo yabantu. Ungcoliseko lwamanzi yeyona nto ibalulekileyo emzimbeni wabantu. Ukuphucula umgangatho wamanzi okusela kubalulekile kwaye kubaluleke kakhulu. Ngokwesiqhelo, amanyathelo okuphucula amanzi okusela ahamba ngolu hlobo: